Orchid ego taa
Orchid calculator online, onye ntụgharị Orchid. Orchid ego taa na ahia ahia ego di iche iche.
Orchid ego na Nigerian naira (NGN)
1 Orchid (OXT) nhata 77.12 Nigerian naira (NGN)
1 Nigerian naira (NGN) nhata 0.012966 Orchid (OXT)
Ntụgharị Orchid na Nigerian naira. Taa Orchid ọnụego Ka Nigerian naira na 03/06/2020.
Orchid ego na dollars (USD)
1 Orchid (OXT) nhata 0.20 dollars (USD)
1 dollar (USD) nhata 5 Orchid (OXT)
Ntụgharị Orchid na dollar. Taa Orchid gbadaa dollar na 03/06/2020.
Ọnụahịa nke Orchid maka taa 03/06/2020 - nkezi ọnụego Orchid sitere na azụmaahịa crypto niile Orchid maka taa. Ego nke Orchid abụghị nke ụlọ akụ etiti guzobere, dị ka ọ dị na ndị nkịtị. Omume ọnụahịa nke Orchid na ntanetị ga-enyere gị aka ịkọ ọnụahịa nke Orchid maka echi. Akwụkwọ ntụaka "Orchid" ọnụego maka taa 03/06/2020 "emelitere n'ịntanetị. Can nwere ike iji ya n'efu.
Orchid ngwaahịa taa
Họrọ mgbanwe kacha mma ma ọ bụ kacha mma Orchid, na-enyocha ọnụego ya na tebụl nchịkọta nke mgbanwe mgbanwe. Ọnụahịa Orchid na Nigerian naira - ọnụ ọgụgụ mkpụrụ maka obere oge, ọnụahịa nke Orchid kwupụtara Nigerian naira. A na-enweta ọnụahịa nke Orchid na Nigerian naira sitere na ọnụahịa nke azụmahịa Orchid megide dollar na site ọnụego nke Nigerian naira megide dollar nke bank etiti guzobere taa. Enwere azụmahịa dị na mgbanwerịrị Orchid - Nigerian naira), nke na-egosi ezigbo ọnụahịa nke azụmahịa Nigerian naira - Orchid. Mana, dịka iwu, òkè ha dị ala karịa Orchid -dollar azụmahịa ndị.
Ego kachasị mma maka ireahịa Orchid nke ị nwere ike ịchọta na ebe a.
Ọnụahịa kacha mma maka ịzụ Orchid nke ị nwere ike ịchọta na ebe a.
OXT/USDT $ 0.215930 $ 0.201033 Best Orchid gbanwere Tether
OXT/BTC $ 0.218420 $ 0.218420 Best Orchid gbanwere Bitcoin
OXT/ETH $ 0.205373 $ 0.201849 Best Orchid gbanwere Ethereum
Gwọ nke Orchid na dollar (USD) - Nkezi ọnụahịa nke Orchid maka taa na dollar US. Ọnụahịa nke Orchid na dollar bụ isi ihe na - egosi nzere Orchid. Ọnụ ahịa Orchid maka ọnụahịa taa 03/06/2020 bụ ọnụahịa nke Orchid mụbara site na nha Orchid na azụmahịa. Ma ọnụ ahịa nke Orchid maka mgbanwe mgbanwe dị iche iche nwere ike ịdị iche n'ihi ọnụego mgbanwe mgbanwe iche iche. Orchid.
Iji gbakọọ ọnụ ahịa Orchid gaa na Nigerian naira, anyị na-anakọta azụmahịa niile maka taa, weta ọnụego mgbanwe na dollar ma kpọghachi ha n'ọnụ ahịa US dollar ruo na Nigerian naira. You nwekwara ike ịchọpụta uru nke Orchid na Nigerian naira na azụmahịa dị na mkpụrụ ego a site na nyochaa tebụl azụmahịa na ọrụ anyị. Pricegwọ nke Orchid na US dollar gbakọrọ ọ bụghị naanị site na Orchid ọnụego mgbanwe, mana kwa site na ọnụọgụ azụtara na ire Orchid, na iche na " Orchid ọnụahịa ". Y’oburu na uzo ahia ahia abuo di iche na mgbanwe onodu mgbanwe di, ya na onu ahia a ma obu Orchid nwekwara ike di iche.
Lezienụ anya na ihe mgbako ọrụ ji arụ ọrụ ji arụ ọrụ Orchid gaa na Nigerian naira n'ịntanetị. Ọ na-egosi ego nke Nigerian naira chọrọ ịre ma zụta ego nke Orchid. Orchid Ntụgharị n'ịntanetị - ọrụ maka ịmegharị Orchid gaa na mkpụrụ ego ọzọ ma ọ bụ ego ego ugbu a na Orchid ọnụego mgbanwe na ozugbo. Ihe oru ngo a nwere oru ihe nlere ego ego di iche na ntaneti. Ọtụtụ mgbe, a na-eji convector emegharị ego nke Nigerian naira chọrọ ire ma ọ bụ zụta ọnụ ọgụgụ nke Orchid.